Update: Wararkii ugu dambeeyay dagaalkii ka dhacay Xabsiga Dhexe & sida hubka lagu helay! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Update: Wararkii ugu dambeeyay dagaalkii ka dhacay Xabsiga Dhexe & sida hubka...
Update: Wararkii ugu dambeeyay dagaalkii ka dhacay Xabsiga Dhexe & sida hubka lagu helay!
Muqdisho (Halqaran.com) – Waxaa faah-faahin dheeraad ah ka soo baxaya iska horimaad hubeysan oo galabta ka dhacay gudaha Xabsiga Dhexe ee Xamar, kaddib markii qaar ka mid ah maxaabiista uu u gacan galay hub, ayna toogasho ku dileen ilaalada Xabsiga.
Ilo wareedyo lagu kalsoonyahay ayaa sheegaya in Ciidanka Haramcad ay hawlgal ka wadaan gudaha xabsiga, iminkana aysan jirin wax rasaas ah oo halkaasi laga maqlayo.
Afhayeenka Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya Ismaaciil Mukhtaar Cumar, oo la hadlay laanta Af Soomaaliga ee BBC-da ayaa sheegaya, in uu hadda socdo baaritaan.
Warar kale ayaa sheegaya in Ciidanka Haramcad ay u muuqdaan kuwo soo gebagabeeyay hawlgalka, intii uu socdayna ay ku dileen afar ka mida maxaabiistii dagaalameysay.
Ciidamo fara badan ayaa lagu arkayay waddooyinka soo galaya xabsiga dhexe ee Xamar oo ku yaalla degmada Xamar Jajab, iyadoona waddoonka lagu xiray gaadiidka dagaalka.
Warbaahinta Halqaran.com, ayaa heshay xog ah in ciidan fara badan ay isku gadaameen gidaarka Xabsiga ugu weyn ee Caasimadda Muqdisho, si looga hortago suurtagalnnimada in maxaabiista qaarkood ay ka baxsadaan Xabsiga, sida uu inoo xaqiijiyay sarkaal ka tirsan booliska Gobolka Banaadir.
Sarkaalkan oo codsaday inaanan magaciisa Warbaahinta loo adeegsan ayaa sheegaya in maxaabiistii xabsiga ka dhex dagaalameysay, ay yihiin Shabaabkii halkaasi ku xirnaa.
Wuxuu kaloo xusay sarkaalkan, inay maxaabiista dishay askarigii hayay furaha bakhaarta, sidaasina ay ugu suurtagashay inay gacanta ugu dhigaan hubkaasi.
Ugu damebyn, waxaa Xabsiga Dhexe ee Xamar ku xiran maleeshiyaad ka tirsan Ururka Al-Shabaab, kuwaa oo ay Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida horey ugu xukuntay xukuno isugu jira dil, xabsi daa’in iyo sanadooyin kale oo xabsi ah. Sidoo kale waxaa ku jira askar ka tirsanaa kuwa dowladda oo xukuno kala duwan ku xukuman.
Dagalka Xabsiga Dhexe ee Xamar